मधुपर्क सम्मानबाट दुई स्रष्टा सम्मानित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मधुपर्क सम्मानबाट दुई स्रष्टा सम्मानित
काठमाडौं। गोरखापत्र संस्थानको मासिक प्रकाशन मधुपर्कले आफ्नो प्रकाशनको ५१औं वर्षको अवसर पारेर वरिष्ठ साहित्यकारद्वय कञ्चन पुडासैनी र प्रा. शिवगोपाल रिसाललाई यस वर्षको मधुपर्क सम्मानबाट सम्मानित गरेको छ। मधुपर्कले विगत १७ वर्षदेखि वरिष्ठ स्रष्टाहरुलाई मधुपर्क सम्मानबाट सम्मानित गर्दै आएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शताब्दी वाङ्गमय पुरुष सत्यमोहन जोशीले सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए । सम्मानित व्यक्तिहरुलाई सम्मानपत्रका अतिरिक्त जनही २५ हजार एक रुपैयाँ नगद राशीसमेत प्रदान गरियो ।
काठमाडौंमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि शताब्दी पुरुष जोशीले राज्यले सांसदहरुलाई करोडौं बजेट दिने तर साहित्यक संस्थाको उत्थानका लागि केही नगरेको कुरा उठाए । गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायले बोल्दै आगामी वर्षदेखि मधुपर्क सम्मानको नगद राशी ३५ हजार एक हुने जानकारी गराए।
संस्थानका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सम्मानित स्रष्टाद्वय कञ्चन पुडासैनी, प्रा. शिवगोपाल रिसाल, सम्मान चयन समितिका संयोजक रमा शर्मा, मधुपर्कका सम्पादक श्रीओम श्रेष्ठ र तुलसीहरि कोइरालाले मन्तव्य राखेका थिए।